११७८५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ भाद्र ०५ , ०९:२५ बजे
विश्वास नै नलाग्ने वातावरण बनायो प्रहरीले । न तर्क दियो, न प्रमाण । अत्तालिएका थिए प्रहरी अधिकारीहरु ।
महेन्द्रनगर, ५ भदौ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले १३ वर्षिया निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्या भन्दै सोमबार भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने ४१ वर्षीय दिलिपसिंह विष्टलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । यो सार्वजनिकीकरणपछि प्रहरी झन् आलोचित हुन पुगेको छ । दिलिपले नै बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरेको प्रहरी दावी अत्यन्त अविश्वसनीय भएकाले निर्मला हत्याकाण्ड झन् रहस्यमयी बनेको छ ।
मानसिक अवस्था बिग्रेका विष्टलाई प्रहरीले प्रलोभनमा पारेर थुनामा पुर्‍याएको परिवारजनको आरोप छ । सार्वजनिक गर्नका लागि प्रहरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन ‘नौटंकी’ मात्रै भएको सञ्चारकर्मीहरुको बुझाई छ । प्रहरीको यो दावीप्रति जनमानसले समेत अविश्वास प्रकट गरिरहेको छ । प्रहरीले आधार नै खुलाउन नसकिने गरी नाटक रचेको भन्दै आन्दोलन झन् चर्कने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रहरीले नाटकीय तरिकाले घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको सर्वत्र अनुभव गरिएकै बेला पत्रकार सम्मेलनमा एसपी डिल्लीराज विष्ट अत्यन्त नर्भस अवस्थामा देखिएका थिए । उनले घटना सम्बन्धमा पत्रकारहरुले गरेका कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिएनन् । उपस्थित पत्रकारले एसपी विष्टले नाटक मञ्चन गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
निर्मला हत्याकाण्डको प्रकरणमा चर्चामा आएका बम दिदीबहिनी बारे पत्रकारहरुले गरेको प्रश्नलाई एसपी विष्टले टाल्दै भने, ‘त्यो पछिको कुरा हो, पछि नै थाहा हुन्छ ।’ एसपी विष्ट पत्रकार सम्मेलन टुंगाउने हतारोमा देखिएका थिए । उनले पत्रकारहरुको एउटा प्रश्नको पनि सन्तोषजनक उत्तर दिएनन् । प्रत्येक प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘अहिले भन्न मिल्दैन ।
आधार नै प्रस्तुत गरेन प्रहरीले
प्रहरीले मानसिक रुपमा अस्वस्थ दिलिप विष्टलाई पेश गर्न समेत ठाउँ नहुने गरी एसपीकै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन बोलाएको थियो । मुकुण्डो लगाइएका दिलिप विष्टलाई फोटो खिच्नका लागि उपस्थित गराइए पनि पत्रकारहरुलाई मुकुण्डो लगाएका दिलिपको फोटो खिच्न हम्मे परेको थियो ।
एसपी विष्टले पत्रकारहरुका सबै प्रश्नको उत्तर छलेका थिए । उनलाई सोधिएका सबै प्रश्नको उत्तरमा उनले ‘अहिले भन्न मिल्दैन’ भने । उनले दिलिप मानसिक अवस्था बिग्रेको व्यक्ति भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
प्रहरीले आइतबार निर्मलाको साइकल पाइएको ठाउँभन्दा ५० मिटर पश्चिम साँझ करिब आठ बजे हातमा लट्ठी लिएर उभिएको अवस्थामा दिलिपलाई पक्राउ गरिएको सञ्चारकर्मीहरुलाई वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साइकल पाइउको ठाउँभन्दा ५० मिटर पश्चिम धानखेत छ । दिलिपका परिवारजनको भनाई अनुसार उनलाई प्रहरीले शुक्रबार नै महेन्द्रनगर बजारबाट घर आउँदा पक्राउ गरेको हो ।
एसपी विष्टले पत्रकार सम्मलेनमा दिलिपले दिएको बयान अनुसारको घटना वृतान्त पनि बताएनन् । उनले ‘प्रारमिभक अनुसन्धान सुरु गरेका छौं’ भनेर कुरा टालेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एसपी विष्ट नर्भस देखिन्थे भने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीआइबी)का डीएसपी अंकर जोशी उपस्थित भए पनि उनले केही बोलेनन् । पत्रकार सम्मेलनमैं केही पत्रकारले नौटंकी गरेको आरोप पनि लगाएका थिए ।
को हुन् दिलिप ?
निर्मलाको हत्यारा भन्दै प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएका दिलिप सिंह विष्ट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । २०६५ सालमा आफ्ना भिनाजुलाई चिर्पट प्रहार गरेर हत्या गरेपछि करिब १० वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरी उनी २०७४ सालको जेठमा मात्रै रिहा भएका थिए ।
भिनाजुको हत्या अभियोगमा जेल बसेर निस्केपछि दिलिप मानसिक रुपमैं समस्याग्रस्त रहेका उनका दाजु खडक विष्टले बताए । अत्यन्तै कमजोर शारिरीक अवस्था भएका दिलिपले गाँजा सेवन गरे पनि मदिरापान भने एकदमै कम गर्ने गरेको वडा नं. १९ खन्ना चौराहका उनका साथी दिलिप थापाले बताए ।
खन्ना चौराहामा भेटिएका स्थानीय वासिन्दाहरुले दिलिपले यसअघि कुनै पनि महिलालाई दुव्र्यव्हार समेत नगरेको बताएका छन् । उनकी छिमेकी खेमा सुवेदीले भनिन्, ‘प्रहरीले भनेजस्तो बलात्कार र हत्या गर्न सक्ने शारिरीक क्षमता नै दिलिपसँग थिएन ।’ सुवेदीका अनुसार दिलिप शारिरीक भार पर्ने कुनै पनि काम गर्न सक्षम समेत थिएनन् । ‘एक अंगाल दाउरा पनि बोक्न सक्दैन थियो’, सुवेदीले भनिन्, ‘सानो काम गर्दा पनि स्वाँ स्वाँ हुन्थ्यो ।’
भिनाजुको हत्याअभियोगमा करिब १० वर्ष जेल बसेर छुटेका दिलिप प्रत्येक दिन बिहान ८ बजे अगावै महेन्द्रनगर बजार आउने र रात परेपछि मात्रै घर फर्कने गरेको प्रहरीको दावीलाई दाजु खडक विष्टले सत्य भएको बताए । खडकका अनुसार प्रहरीले दावी गरेझैं उनी निर्मलाको शव फेला परेको स्थान भएर जाने बाटो कहिल्यै प्रयोग गदैन थिए । दिलिपका दाजु, साथी र टोलवासीका अनुसार दिलिप तीन किलोमिटर छोटो पर्ने खैरभट्टीको बाटोबाट मात्रै ओहरदोहर गर्थे । ‘खैरभट्टी हुँदै आउने जाने गथ्र्यो,’ साथी थापाले भने, ‘खोल्टीको बाटो हिंडेको थाहा नै छैन ।’
महेन्दनगरबाट खैरभट्टी हुँदै खन्नाचौराहा पुग्ने बाटो महेन्द्रनगरबाट खोल्टी हुँदै खन्नाचौराहा पुग्ने भन्दा करिब ३ किलोमिटर छोटो छ । दिलिप जहिल्यै पैदल हिंड्ने भएकाले उनले छोटो बाटो नै प्रयोग गर्ने गरेको उनका दाजु, साथीहरु र टोलका वासिन्दाहरुको भनाई छ ।
पक्राउ परेका दिलिप माग्दै हिड्ने गर्दथे । महेन्द्रनगर बजारमा उनलाई चिन्नेहरु पनि प्रहरीको दावी अविश्वसनीय रहेको बताउँछन् । दिलिपको मानसिक मात्रै नभई शारिरीक अवस्था समेत बलात्कार गर्न सक्ने नरहेको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन् । ‘कखुरा मार्न सक्ने बल र बुद्धि छैन उसमा’, छिमेकी सुवेदीले भनिन्, ‘१३ वर्षकी किशोरीमाथि आक्रमण गर्ने, घिसारेर खोलो तार्दै ५० मिटर टाढा लैजाने बल उसमा छँदै थिएन ।’
झन् आशंकामा प्रहरी
प्रहरीले आपराधिक पृष्ठभूमि रहेका दिलिप विष्टलाई हत्यारा सावित गर्ने प्रयास गरे पनि सर्वत्र त्यसको आलोचना भइरहेको छ । दिलिपलाई अधिकांश महेन्द्रवासीले चिन्ने भएकाले पनि उनलाई फसाएर वास्तविक अपराधीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै आक्रोश बढेको छ ।
प्रहरीद्वारा पत्रकारहरुलाई वितरित प्रेस नोटमा दिलिपले निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा आफूले गरेको स्वीकारेको उल्लेख छ । तर, प्रहरीले पत्रकारहरुका सामु दिलिपलाई प्रस्तुत गर्न समेत कञ्जुस्याईं गरेको थियो ।
मानसिक रोगी विष्टले दिएको बयानको सारांश समेत प्रहरीले पत्रकारहरुलाई भन्न नमिल्ने बताउँदा प्रहरीको कदम झन् शंकास्पद बनेको छ । पत्रकारहरुको एउटा प्रश्नको समेत उत्तर नदिने पत्रकार सम्मेलन प्रहरीले गरेको यो पहिलो घटना हो । सबै प्रश्नमा एसपी विष्टले ‘अहिले भन्न मिल्दैन’ भनेका थिए ।
प्रहरीले सुरुदेखि नै यस प्रकरणमा शंकास्पद भूमिका गरिरहेको छ । चक्रदेव वडू नामका युवकलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखी निर्मलाको हत्याको जिम्मेवारी स्वीकार्न दवाव दिइएको थियो भने नेगी थरका एक युवकलाई पनि प्रहरीले यस्तै दवाव दिएको थियो । नेगी थरका ती युवकले प्रहरीकै पोल खोलिदिने धम्की दिएपछि उनलाई छोडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै स्रोतको कथन छ ।
प्रहरी अत्तालिंदा उल्टो फसाद
प्रहरीले तीन दिन अगाडि नै दिलिपमा पक्राउ गरेको थियो । उनलाई करिब ४८ घण्टा गैरकानुनी थुनामा राखेका खबर चुहिएपछि सोमबार प्रहरीले हतारमा उनलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई सोमबार न्यायिक हिरासतमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार दिलिपको बयान समेत लिइएको छैन ।
गैरन्यायिक हिसारतको अभियोग लाग्ने खतरा बढेकपछि १० दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखिएका दिलिपलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रहरीले पत्रकारहरुलाई आइबार मात्रै दिलिप पक्राउ परेको लिखित सामग्री वितरण गरे पनि शुक्रबार प्रहरीले दिलिपलाई नियन्त्रण लिएको दृश्य देख्नेहरु पनि उपलब्ध छन् । उनीहरुले अदालतमा बयान दिन आफूहरु तयार रहेको मानसखण्डलाई बताएका छन् ।
हत्याकाण्डको छानविनका लागि आएको सीआइबीको टोली समेत अब आलोचनामा पर्ने देखिएको छ । प्रहरीले शुक्रबार नै हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई सीआइबी समेतको उपस्थितिमा आइबार निर्मलाको शव भेटिएको स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रेषित समग्रीमा उल्लेख छ ।
यस्तो प्रपञ्च प्रहरीको
मानसिक रोगी दिलिपलाई पक्राउ गरे पनि पर्याप्त प्रमाण नहुँदा निर्मलाका बाबुलाई सोमबार प्रहरीले बोलाएर दिलिप विरुद्ध जाहेरी दिन दवाव दिएको थियो । पन्तका अनुसार दिलिपको अनुहार समेत नदेखाई प्रहरीले जाहेरीमा दस्तखत गर्न भनेको थियो । ‘सीआइबीले बागफाँटाको मान्छे हो जाहेरीमा दस्तखत गर्नुस् हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्यो’, पन्तले भने, ‘नाम पनि बताएन ।’ तर, पत्रकार सम्मलेनमा एसपी विष्टले पन्तलाई त्यस्तो दवाव नदिइएको दावी गरे ।
दिलिपको बयान भन्दै
सोमबार सीआईबीका अधिकारीहरुले निर्मलाका बाबुलाई जाहेरीमा दस्तखत गर्न दवाव दिंदा प्हरीले उनलाई सुनाएको कथा रोचक छ । पन्तका अनुसार प्रहरीले दिलिपको बयान भन्दै यस्तो कथा सुनाएको छ :
‘साउन १० गते मँ बजारबाट घर गइरहेको बेला निम्बुखेडाको सो ठाउँमा निर्मलाको साइकलको चेन फुत्किएको हुँदा उनले मलाई चेन चढाइदिन अनुरोध गरिन् । मैले चेन चढाउन खोज्दा उनको शरीर छुन पुगें र म उत्तेजित भएँ । साइकलको चेन चढाएपछि मैले साइकल चलाएँ उनी बसिन् । केही पर मैले जानीजानी साइकल खोलामा फ्याकें । फ्याँकिएको साइकल उठाउन मैले आग्रह गर्दा उनले अम्बाको पोलिथिन र किताब खोलाको छेउमा राखेर मलाई सहयोग गर्न हात दिइन् । उत्तेजित भएको मैले त्यही मौका छोपेर उनलाई घिसारेर लगें । मैले उनलाई घिसारेर उखु बारीमा लगेर बलात्कार गरी घाँटी च्यापेर मारें ।’
नाटकमा माहिर प्रहरी
सोमबार प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिलिपको बयान भन्दै कथा सुनाइसकेपछि निर्मलाका बाबुलाई शव पाइएको स्थलमा पनि लगेको थियो । जिप्रकामा प्रहरीले निर्मलाको शवसँगै पाइएको दिलिपको सर्ट भन्दै छिर्केमिर्के एक सर्ट देखाएको थियो । शव पाइएको स्थलमा पुगेपछि प्रहरीले केही खोजेजस्तो गर्दै एकछिन यताउता खानतलास गरेको र पछि ‘सर पाइया भन्दै’ त्यही छिर्केमिर्के सर्टको खल्तीको बाहिरीपट्टीको टुक्रा फेला पारेर पन्तलाई समेत देखाएको थियो । पन्त त्यो दृश्य आफूलाई नाटक जस्तो लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिप्रकामैं हेर्नुस् यो सर्टको खल्तीको कपडा घटनास्थलमा हुनुपर्छ भनेका थिए, नभन्दै खोजेर देखाइदिए ।’
दिलिपका दाजु खडकले सोमबार बिहान प्रहरी आफ्नो घरमा आई दिलिपको एउटा सर्ट र एउटा हाफ पाइन्ट लगेर गएको बताएका छन् । उनले खल्ती च्यातिएको सर्ट छिर्केमिर्के भएको बताएका छन् । प्रहरी आफ्नो घर पुग्दा खडकले वडा नं. १९ का अध्यक्ष दामोदर महरालाई बोलाइएका थिए । अध्यक्ष महराले खानतलासी र जफत गरिएको लुगाको मुचुल्का गरिएको बताए । खडकका अनुसार सर्टको खल्ती केही च्यातिएको भए पनि टुक्रा नै ननिस्केको बताए । महरा र खडक दुबैले प्रहरीले लगेको दिलिपको कपडा आफूले चिन्न सक्ने बताएका छन् ।
निर्मलाका बाबु पन्तले घटनास्थलमा कण्डमका केही खोलहरु पनि छरिएको आफूले देखेको बताए ।
सीबीआई पनि शंकाको घेरामा
घटनास्थल र शवको कुनै फोरेन्सिक जाँचविनै नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको सीआइबीले समेत निर्मलाको हत्यामा दिलिपको संलग्नता रहेको एसपी विष्टको दावीमा सहमति जनाएको छ ।
यस हत्याकाण्डमा अनुसन्धान कुकुरको परिचालन गरिएको थिएन । मृतक निर्मला र पक्राउ परेका दिलिप विष्ट दुबैजनासँग मोबाइल फोन थिएन । र, निर्मलाको शव परीक्षणपछि पठाइएका नमुनाको मेडिकल रिपोर्ट पनि आइनसकेको स्रोतको भनाई छ । न त दिलिपको रगत वा बीर्य नै जाँचका लागि संकलन गरेर पठाइएको छ ।
बस्तुगत आधार नै नभनेर एसपी विष्टले दिलिपलाई अभियुक्त भन्दै पेश गरेको पत्रकार सम्मलेनमा सीआइबीका डीएसपी अंकुर जोशी पनि उपस्थित थिए । उनको उपस्थितिले एसपी विष्टको कथनमा सीआइबीको समर्थन रहेको देखाएको छ ।
डीएसपी जोशी सीबीआइका सूचना प्रविधि विज्ञ हुन् । निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा उनलाई फोरेन्सिक विज्ञकै रुपमा काम लगाइएको छ ।
केही अपत्यारिला प्रहरी दावी
एसपी विष्टले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित र इमेलबाट सम्प्रेषित सामग्रीमा दिलिप विष्टलाई निर्मलाको साइकल पाइएको स्थानभन्दा ५० मिटर पश्चिमतर्फ प्रहरी र सीआइबीले दिलिपलाई हातमा लट्ठी बोकेको अवस्थामा भेटाएको उल्लेख छ । तर, ५० मिटर पश्चिममा धानखेत रहेको छ । यसबाट प्रहरीले हतारमा सो सामग्री तयार पारेको संकेत पाइएको छ । तर, प्रहरीले दिलिप सडकमा उभिइरहेको भन्दै सो सामग्रीमै लेखेको छ ।
साउन ११ गते निर्मलाको शव प्राप्त भएको स्थल प्रहरीले सिल गरेको थिएन । सो ठाउँमा सयौं मान्छे पुगेका थिए । कसैले पनि त्यहाँ कण्डमका खोल देखेका थिएनन् तर आइबार प्रहरीले निर्मलाका बाबुलाई त्यहाँ लैजाँदा कण्डमका खोल रहेको पन्तको भनाई छ । बलात्कारीले कण्डम प्रयोग गरेर बलात्कार गरेपछि हत्या गरेको देखाउन खोजिएको अनुमान गरिएको छ । यसबाट बलात्कारीको बीर्य नै जाँचका लागि नपाइएको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रयोग गरिएको कण्डम बलात्कारीले आफैसँग लगेको हुँदा बीर्यको नमुना नपाइउको प्रहरीले दावी गर्नसक्ने ठाउँ राखेको अनुमान गरिएको छ ।
निर्मलाको बलात्कार अत्यन्त पाशविक तरिकाले गरिएको शव देख्नेहरुले बताएका छन् । प्रहरी स्रोतकै अनुसार उनको यौनांग तथा मलद्वार क्षतविक्षत थियो । यस्तो अवस्थामा पनि बीर्य नपाइउको दावी गरेमा अदालतले विश्वास नगर्ने देखिएको छ ।
प्रहरीले घटनाको २६ औं दिनमा शव पाइएको स्थलबाट सर्टको खल्तीको टुक्रा पाएको छ । निर्मलाका बाबुका अनुसार सो टुक्रा हेर्दा २६ दिनदेखि भुईमा गाडिएको जस्तो देखिन्न थियो । प्रहरीको यो उपलब्धिलाई समेत रोचक मान्न सकिन्छ ।
प्रहरीले निर्मलाका बाबुलाई भनेअनुसार दिलिपले उल्टाखाम जाने सडकबाट करिब एक सय मिटर घिसारेर निर्मलालाई उखुबारीमा लगेर बलातकार र हत्या गरेको स्वीकारेका छन् । साइकल पाइएको स्थानबाट शव पाइएको स्थानसम्म घिसारेर लगिएको कुनै चिन्ह न सुरुमा देखिएको थियो, न अहिले नै देखिन्छ ।
करिब ४० किलोकी निर्मलालाई घिसारेर ५० मिटर टाढा लगेर बलात्कार र त्यसपछि हत्या गर्ने दिलिपको शारिरीक अवस्था नभएको आफन्त, छरछिमेक र साथीभाईले बताएका छन् । प्रहरीले आफ्नो यो दावी अदालतसमक्ष सत्य सावित गर्न दिलिपलाई टन्न खुवाएर १० दिनमैं हृष्टपुष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रहरीले आइतबार दिलिपको घरबाट जफत गरी ल्याएको टिसर्टको खल्ती आधा मात्रै च्यातिएको उनका दाजुको भनाई छ । प्रहरीले पहिलो म्यादमैं त्यो टिसर्ट अदालतमा पेश गरे परिवारजनले पहिचान गर्नेछन् ।